စမ်းချောင်းရဲ့ ဒိုင်ယာရီ | Sanchaung Journal | Page 2
Category Archives: စမ်းချောင်းရဲ့ ဒိုင်ယာရီ
February 13, 2009 freebird	Leaveacomment
၂၀၀၈ ၊ဖေဖော်ဝါရီ၊ ၁၄ ရက်မှ စတင်ခဲ့တဲ့ စမ်းချောင်းတစ်ခု စီဆင်းခဲ့တာ (၁) ပြည့်ခဲ့ပါပြီ။
ကောင်းသော အရာများကို မျှဝေသောမိတ်ဆွေများ၊
အဖက်ဖက်က တတ်စွမ်းသရွေ့ ကူညီပေးသောသူများအားလုံးကို အထူးပင် ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
စမ်းချောင်းဂျာနယ်မှာ ၂၀၀၉၊ ဇန်န၀ါရီလဆန်းမှစပြီး အသစ်သစ်သောစာများ မတင်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက် တောင်းပန်ပါတယ်။
အသစ်အသစ်သော အကြောင်းအရာများကို စဉ်းစားမိပြီး၊လက်တွေ့ အကောင်အထည်မဖော်နိုင်တာ ကျွန်တော်တို့ ရဲ့ လိုအပ်ချက်ပါ။
လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပြီး စမ်းချောင်းဂျာနယ် ဆက်လက်ရှင်သန်နေမှာပါ။
…………………ရတု အလီလီ ဆက်လက်စီးဆင်းနိုင်ဖို့ ကျိုးစားရဦးမယ်။
November 30, 2008 freebird	1 Comment
(¯`*•.¸,¤°´’`°¤,¸.•*´¯) ¸,¤°´’`°•.¸O¸.•°´’`°¤,¸ ♥
♥ ´’`°¤¸¸.•’´O`’•.¸¸¤°´’` (_¸.•*´’`°¤¸’¸¤°´’`*•.¸_)…
2008 December ကို ကြိုဆိုလျှက်
စမ်းချောင်းဂျာနယ် pdf ဖိုင်
August 25, 2008 wunna	Leaveacomment
စမ်းချောင်းဂျာနယ် pdf ကို ၁၅ရက် တစ်ကြိမ် ထုတ်ဝေမှာဖြစ်ပါတယ်။
စာမျက်နှာကို ထပ်ထိုးပြီးထုတ်ဝေမှာပါ။ ဒါပေမယ့် ဖိုင်ဆိုက် သိပ်ကြီးသွားမှာလည်း စိုးရိမ်တဲ့အတွက်
pdf ဂျာနယ်ဟာ စမ်းချောင်းဒေါ့ကွန်းကို အင်တာနက်ပေါ်မှာ မကြည့်နိုင်သူတွေအတွက် ရည်ရွယ်ပြီး အီးမေးလ်ကနေ အတက်ခ်ျဖိုင်နဲ့ ပို့တာဖြစ်တဲ့အတွက် ဆောင်းပါး အများစုက စမ်းချောင်းဒေါ့ကွန်း မှာ ဖော်ပြပြီးသားတွေဖြစ်နိုင်သလို မဖော်ပြရသေးတဲ့အသစ်တွေလည်း ပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် စာ ဆိုတာ မဖတ်ရသေးသူတွေအတွက်ကတော့ အသစ်ပေါ့ နော့။
Vol 1. Vol 2. Vol 3. Vol 4.
August 21, 2008 freebird	Leaveacomment
စမ်းချောင်းဂျာနယ် ကို စတင်ခဲ့တာ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၄ ရက် ၂၀၀၈။
မှတ်မိသောစာ၊ နှစ်သက်သောအကြောင်းအရာ မျှဝေပေးလိုတဲ့စေတနာ စတင်ခဲ့တာ ၆ လ ကျော်လာခဲ့ပြီ။
ရံဖန်ရံခါ ကောင်းနှိးရာရာလေးတွေစုပြီး ဂျာနယ်အသွင် အမျိုးမျိုးဆင်ပြီး pdf နှင့် ထုတ်ဝေခဲ့တာ Vol 1. Vol 2. Vol 3. Vol 4. သို့ ရောက်ခဲ့ပြီ။
စာ၊ကဗျာတွေ မျှဝေပေးသောသူငယ်ချင်းတွေ၊ အကြံဥာဏ်ကောင်းတွေပေးသော သူငယ်ချင်းတွေ၊ online ပေါ်မှ စာဖတ်သူတွေ – အားလုံးကို အရမ်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
တချို့ ဆို မမြင်ဖူးဘူး ၊ တချို့ ဆို ကမ္ဘာရဲ့ တစ်ဖက်ခြမ်းကသူတွေ၊
ဘယ်လို နေရာတွေ ဝေးပေမယ့်- -
ဒီနေရာကိုလာကြသူတွေ အားလုံးဟာ မြန်မာစာ၊ မြန်မာစကားကို နှစ်သက်မြတ်နိုးတန်ဖိုးထားတဲ့သူတွေပါပဲ-
April 11, 2008 freebird	Leaveacomment
သင်္ကြန် နှင့် ပိတောက်
ဒီနှစ်သင်္ကြန်မှစ နောင်ရောက်လာမဲ့ ရက်တွေ၊နှစ်တွေမှာ ပြည်တွင်းပြည်ပမှာရှိတဲ့ မြန်မာတွေ
ကြောက်ရွံ့ ထိတ်လန့် ရခြင်းမှလွတ်မြောက်ပါစေ။
လွတ်လပ်ခြင်း၊ ပြည့်စုံခြင်းတွေနှင့် အေးချမ်းသာယာပျော်ရွှင်ပါစေ။
ကျန်းမာခြင်း၊ချမ်းသာခြင်းတို့ ကို အရင်ကထက် ပိုမိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေ။
စမ်းချောင်းဂျာနယ်မှ ဆုတောင်းလျှက် 2008 အတာသင်္ကြန်ကိုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။
email your “POST”
February 19, 2008 admin	Leaveacomment
1 .Readers can send email the post/page content that they like
2. Contact Form is working.
how to post with zawgyi
text formatting style အဖြစ် သုံးလေ့ရှိတဲ့ <span> tag element ကို သုံးပြီး ရေးလို့ရပါတယ်။ ဥပမာ
<span style=”font: 13px ‘Zawgyi-One’, zawgyi1, arial, sans-serif;”>
ဒီအထဲမှာ မြန်မာလိုတွေ ရေးလို့ရပါတယ်။
ဒီလိုရေးပြပေမယ့် Wodpress အသုံးပြုထားတဲ့ TinyMCE Editor က နည်းနည်းတော့ ပြန်ပြင်ပါတယ်။ ကိစ္စမရှိပါဘူး။ စမ်းကြည့်စေချင်ပါတယ်။ Title ကို tag ထည့်ပြီး ရေးကြည့်ခဲ့ပါတယ်။ မရခဲ့ပါဘူး။ အဲဒိ့တော့ Title ကို English လို ရေးပေါ့။
? တွေပေါ်နေလို့ အခက်အခဲဖြစ်ရင် NotePad ထဲမှာ အရင်ရေးပါ။ ပြီးတော့ လာ paste လုပ်ပြီးထည့်ပါ။